नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुने मत अभिमत टेलिभिजन कार्यक्रम गोरखा जिल्लाको सदरमुकाममा छायाँकन गरियो । गोरखाको बारपाक २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो । भूकम्प गएको १६ महिना पुगिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा प्रभावितहरु विचल्लिमा परेका छन् । बहसको मुख्य विषयवस्तु भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कस्तो भयो ? कस्तो हुदैंछ ? र कहाँ पूग्यो ? भन्नेमा केन्द्रित थियो । छायाँकन टोलीले गोरखा नगरपालिका–४ स्थित भूकम्पले क्षति पूयाएको बस्तीको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो । त्यहाँका भूकम्प पीडित बासिन्दाले कसरी पुननिर्माणका काम अघि बढाएका छन् । पुनर्निर्माणमा ढिलाई हुँदाका अप्ठ्याराहरु… पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्पबाट भत्किएको बौद्धनाथ स्तूपाको निर्माण कार्य सम्पन्न
भूकम्पबाट भत्किएको बौद्धनाथ स्तूपाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको स‌ंयोजन, पुरातत्व विभागको प्राविधिक सहयोग, विभिन्न संघसंस्था तथा निकायको आर्थिक सहयोगमा स्तूपाको निर्माण गरिएको हो । औपचारिक कार्यक्रम गरी स्तूपाको उद्घाटन गरिने बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
सरकार परिवर्तन गरेर मात्रै भूकम्प पीडित जनताले राहत पाउँदैनन्
गोरखाको बारपाक २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो । भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको विषयमा छलफल गर्न व्यवसायिक पत्रकारीता अध्ययन केन्द्रले मत अभिमत कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । बहसको मुख्य विषयवस्तु भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कस्तो हुदैंछ ? र कहाँ पूग्यो ? भन्नेमा केन्द्रित थियो । गोरखालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको पत्रकार सुदीप कैनीले पुनर्निर्माणको बर्तमान अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी गरेका थिए । उनले निजि घरहरु पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने दुई लाखको अनुदान सम्झौता भई रहेको र पीडितहरुले पहिलो किस्ता बराबरको ५० हजार रकम पाउन थालेको बताए । गाउँमै गएर… पुरा पढ्नुहोस्
४ लाख भूकम्प पीडित घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता, पीडितलाई दिइने अनुदान तीन लाख पुर्‍याइने
सरकारले गत वर्षको भूकम्पबाट पीडित ४ लाख बढी परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै ४ लाख १३ हजार ४ सय ५२ पीडित घरधुरीलाई घर निर्माणको लागि अनुदान रकम दिन सम्झौता भएको हो । सरकारले भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गर्नेछ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । पीडित परिवारले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउँनेछन् । भूकम्पले घर बस्नै नहुँने गरी क्षति पुगेको परिवारलाई सरकारले अनुदानबापत रकम र निव्र्याजी… पुरा पढ्नुहोस्
यस्तो छ धरहराको प्रस्तावित डिजाइन
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक धरहराको प्रस्तावित डिजाइन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । भत्किएको भग्वनावशेषलाई जस्ताको तस्तै छाडेर छेउमै नयां संरचना बनाउन लागिएको हो । धरहरा बनाउन सरकारले पुरातत्व विभागलाई ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मेरो धरहरा मै बनाउछु भन्ने अभियान सुरु गरेर धरहरा पुननिर्माण कोषमा जनताबाट सहयोग संकलन गरिरहेको छ । स्केच स्राेत : पुरातत्व विभाग पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार यो कोषमा अहिलेसम्म २ करोड रुपैयां जम्मा भइसकेको छ । नयां धरहरा बनाउन ३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । पुरा पढ्नुहोस्
भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्यबाट सहयोग पाएका छैनन् । दलीय किचलोले भूकम्प गएको ९ महिनामा मात्रै पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना गठनले पनि समय लियो । प्राधिकरणमा कर्मचारी जान नमानेको अवस्था छ जसका कारण पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सकेन । यिनै सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्यले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञावलीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो । तर सरकारी योजना कुर्दाकुर्दा पीडितले घर निर्माण सुरु नै गर्न पाएनन् । किन यस्तो भयो… पुरा पढ्नुहोस्